Northern Ìhè | Holmbygden.se
Saịtị bụ n'okpuru mmepe
Holm bụ na 62 ohere ebe e nwere ezi ohere na-ahụ n'ebe ugwu ọkụ a doro anya oyi na nnọọ geomagnetic ọrụ atmossfären. N'okpuru ebe a na-akpaghị aka emelitere kwuru na amụma iji hụ ugwu ọkụ. Rịba ama na mgbe ụfọdụ kwuru ebe a na-iji. Swedish oge na-+ 1h oyi na + 2 awa ke ndaeyo.
Gịnị bụ Northern Ìhè?
Northern Ìhè, Aurora borealis, na-adabere na anyanwụ na-ewetụ nke akpa ume na a tụba si anyanwụ na-akụrisị Ụwa ndọta. Si otú ike a tọhapụrụ na-etolite a mara mma na-enwu. Chọrọ ịmụta ihe banyere Northern Ìhè bụ a obere film banyere dum usoro ebe a, a Norwegian akwụkwọ ebe a ma ọ bụ karịa obere ọzụzụ US movies ebe a.
Northern ọkụ achọ doro anya weather ezi ọhụhụ. Lee nso na amụma Holm ma ọ bụ Sundsvall. Special satellite image nke ugbu a urukpuru n'elu Sweden nwere ike ebe a.
Magneto gram Sundsvall (isi iyi) ọrụ:
Magneto gram Sundsvall. Large deviations na ndọta enye ịrị elu ọzọ n'ebe ugwu ọkụ. Bz (green) ga-n'okpuru akara (minusladdat) maka Northern Ìhè na-hụrụ. isi iyi.
Hur läses tabellen? Se fler transcription ebe a.
Amụma Northern Ìhè on 30 m (isi iyi / isi iyi)
Ihe nlereanya wepụtara na ike nke Aurora oval on 30 min dabeere data si ACE-satelliten. na ụkpụrụ <20 GW = obere / dịghị ugwu ọkụ, 20-50 GW = ohere ịhụ nso Northern Ìhè, >50 = Great ohere ịhụ na a ọtụtụ ọrụ na ije nke elu-igwe. >100 GW = Northern Ìhè nwere ike hụrụ ọtụtụ narị nnù pụọ. Ihe nlereanya na-egosi bụghị nanị na osisi ike nke Aurora oval, ma ebe i nwere ike ịhụ pola ọkụ ugbu a. The red akara na-egosi ebe ị pụrụ ịhụ na ala pola ọkụ na mmiri. The Northern Ìhè nwere ike hụrụ alltås n'ebe ugwu nke red akara. The puru na-graded site na agba ọnụ ọgụgụ.
Eburu amuma maka ugwu ọkụ n'elu ọzọ ubọchi atọ (isi iyi)
The mmanya chaatị na-enye a amụma ugwu ọkụ närsmsta ụbọchị. “KP-index” egosi geomagnetic ọrụ. 1-3= Obi nwayọọ ndọta, 4-5= Active magnetik, 6-8= oké ifufe, 9= Arọ oké ifufe. Site KP index 3 e nwere a ohere na ugwu ọkụ iwụtde Holm na Sundsvall (isi iyi).
Mụta ihe banyere KP-Index ebe a.
Atụmatụ na ohere nke auroras taa (isi iyi 1, isi iyi 2, isi iyi 3)
Amụma si Alaska geomagnetic guzobe, Norwegian TV na SpaceWeatherLive.com. Norr om den smala linjen finns möjlighet att se norrsken.
Tupu ọrụ ụbọchị ikpeazụ nakwa na amụma 4h-atụ (isi iyi)
Ubi na-egosi hụrụ data, mgbe odo akara na-egosi amụma data.
Tupu ọrụ na n'oge gara aga izu
Lee ihe ezigbo oge nlele nke ohere weather data Spaceweatherlive.com, Noaa / Space Weather Prediction Center ebe a na ebe a, ma ọ bụ kpọmkwem site ACE-satelliten.
Web-cam n'elu pola igwe
Web igwefoto 360 degrees gafee na mbara igwe na Tromsø, Norway, nke dị na a elu ohere n'ebe ugwu nke Sweden na Northern Ìhè pụrụ mgbe mgbe ga-hụrụ.
Ọhụrụ na ohere ihu igwe si Spaceweatherlive.com
14/5: Strong G3 geomagnetic storm ... GỤKWUO
13/5: Filament eruption, yet another CME ... GỤKWUO
12/5: Faint partial halo coronal mass ejection ... GỤKWUO